Mulkiilaha Universal oo raali galin siiyay Somaliland gormuu joojin donaa xadgudubyada uu Ogaadeenay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
29th September 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Waxaan la soconaa in uu TV ga Universal yahay TV si weyn uga soo horjeeda geedi socodka Halganka Ogaadeenya lagu xoreynayo kaas oo marwalba soo bandhiga duudsiga & xaqirida shacabka Ogaadeenya. Wuxuu TVga Universal ku caanbaxay in uu shacabka Ogaadeenya ee Ethiopian gumaysato uu marwalba ka shegaa wuxuu gumaysigu u dhiiba isaga oo dhanka kale xukuumadda Ethiopia u soo bandhigo wax aka farxiya.
Ahmed Abubukar wuxuu maanta Raaligalin ka bixiyay hadal uu ku caayay Madaxweynaha Maamulka Somaliland kaas oo sababay in laga caydhiyo guud ahaanba Somaliland wuxuuna maanta ka karaali galiyay guud ahaanba shacabka Somaliland isaga oo ka codsaday in uu dib ugu soo noqdo deegaanada Somaliland oo uu hadda mamnuuc ka yahay.
Hadaba is weydiintu waxay tahay Ahmed Abubakar ma garwaaqsan donaa in uu shacabka Ogaadeenya ka daayo jariimada joogtada ah ee malin walba ka soo daayo TVga Universal. Ogaysiis Qoraalkaan Iyo ra’ayiga uu wato wuxuu u Gaaryahey qoraaga kaliya Mareeg masuul ma ka Aha